Safety vari yemagetsi skateboard yemakambani vachibvunza zvakanakisisa mibvunzo? - Jomo Technology Co., Ltd
Safety vari yemagetsi skateboard yemakambani vachibvunza zvakanakisisa mibvunzo?
Maererano kuvaka pamusoro skateboard, muve kufungisisa zvimwe inobudisawo ayo kukura. Kana uchida pfungwa yemagetsi skateboard, Asi iwe rudo rwenyu chipo setup, unofanira kutora Kutarira the: chikuru modular yemagetsi powertrain. Mune aifamba nyika kukurumidza akafanana needu, nhanho uye mutengo kunyatsoshanda ndizvo zvakakosha chinhu zvinhu maererano zvokufambisa. Ndizvo. Asi sezvinoita motokari, velocity uye siyana vari Uyezve kukosha nokuti haugoni chete kumisa Midway uye akamurairawo kumusoro pakati pomugwagwa. Uyezve, kana ukawira kuna pasi, rwakapetwa kusvikira iwe kurega kuramba kure skidding. Zvakanyorwa dzakagadzirirwa kukwira aine Handheld kure kuti anoita unotanga nayo, kuamisa uye kuchinja velocity, uye rine modes maviri kutakura vatengi zvitsva kana unyanzvi. Zviri nyore kuona kuti nei izvi zvinhu zvikuru sei chipo uye mutambo. Ndiyo imwe shamwari wakanakisisa nokuda kure-munzira adventures Zvisinei zviri zvakare clunky chinhu zvakavaomera kushandiswa.
Saka chii chiri chikuru shoma yemagetsi skateboard? Unogonawo kuona kubva kumaruwa utariri pamwe skateboard wako kumhanya nenzira magetsi. The Inboard aiva zvishoma pamusoro rinorema divi asi ane sokuti akaumba kure kuti raingova kumbonyanya snug kuti vazvichengete, nokuti chaizvoizvo kworutivi. Vapedza pedyo maawa 200 kutsvakurudzwa ari pezvitsiga vakakwana uye yokutevedzera pamusoro kumusika, takatenga pamusoro 10 mapuranga zvinowanikwa pamusoro pamusika yakakodzera ichi uye akavaedza zvinogonekwa-ne-divi kutsvaka kuti e-skateboard chaizvoizvo kutonga vose! Isu maita zhinji yemagetsi skateboard Mutengo kutsvaka kuti mapuranga ndizvo chaizvo yakanakisisa dzemagetsi Skateboards . Wemagetsi skateboard kwakasiyana nezvaiitwa skateboard nokuita motorized chirungiso chinoita kuti kushandisa skateboard munhu Heck yose asi zvizhinji nyore kuti mutasvi itsva uye chinopa chaiyo kava kuti ruzivo mutasvi. Kukosha - Kazhinji inokosha thumbs, pamwe dzemagetsi Skateboards iwe zvawanga kubhadhara.
Chokwadi. Kutaura zvazviri, dzemagetsi Skateboards tiri mumwe yakanakisisa humwewo sarudzo Last Mile chokufambisa. Koowheel utsanzi makasimba akasuma nhoroondo Four vhiri Electric Skateboard pamwe mapatya injini, anoshandiswa pfupi daro famba uye zvichingodaro. Mukati nhoroondo dzose velocity ose 30km / h, bhatiri upenyu kungava anenge 20 kusvika 25km. Podràs kuverenga zvizere Dynacraft yemagetsi skateboard zvayakaita pano. Ungave uri kuda kuti atore dandadzo itsva kana tarisa inotonhorera Browsing pakarongwa namabwe, kuti coolest dzemagetsi Skateboards vari pano kuti tarisa. To muchidimbu - kuti iwe uve nokukurumidza, yakavimbika uye kupfuura zvose zvikuru panokwanisika yemagetsi skateboard, ipapo koowheel 2 chizvarwa kooboard ndizvo zvauri kutsvaka! Chinhu chinokosha chinhu kuti muenzaniso iwe kutenga hamufaniri skimp pamusoro ndiyo kusarudzwa pre-yakatarwa mabhiza modes. Izvi chokufambisa mano ndivo inotakurika uye dzinofambiswa pedyo rechargeable bhatiri anogona zvose kushandiswa sezvo dzenyu huru mhando chokufambisa kana zvinogona kushandiswa kuenda uye kubva mabhazi. Izvi longboard yakazara anoshandisa lithium-Ion bhatiri anunure mimwe ZIP nokuda kwenyu longboarding kunakidze, kurova aimhanya kusvikira 26 mph (42kph) pamusoro zvishoma kushandiswa.
Izvi dzemagetsi Skateboards vari nyore kuti varasikirwe uye kushandisa. The chikuru Skateboards yemagetsi akanga pakutanga dzakagadzirirwa kuona pamusoro chete hukawanika sezvo bikes uye nemotokari. Pane kudaro yakawanda dzemagetsi Skateboards panze zvinowanikwa pamusoro pamusika iko zvino, kuti zviri nani unotambudza kuongorora bhodhi kukwira kunyange rakamanikana divi akadai chete kumhanya uye zvinosiyana. Electric Skateboards kupa kukuru mararamire zvakanakira kuti vatasvi uye kuti pafiripi ose zuva pakufamba kuenda kwaaishanda kupinda inonakidza ruzivo. Zvikurukuru zvikuru kukura mune zvemichina waakagadzirira dzemagetsi Skateboards izvi. Nhanhatu makiromita aigona kuva siyana zvakakwana kuti mangwanani adopters uye mafeni, kana vanhu vane vanganzi pfupi commutes. Ini ndiri chaizvo kuwirirana pakuti ndoda nokukurumidza uye chikuva chinhu chaizvoizvo inotakurika.
Post nguva: Mar-07-2018